Filoha Rajoelina tany Ambilobe : “Fotoan’ny fampandrosoana izao” | NewsMada
Aiza ho aiza isika amin’izao? Fotoan’ny fampandrosoana izao, araka ny nambaran’ny filoha Rajoelina tany Ambilobe.
“Tsy ny lalana an’Ambilobe sy i Vohémar ihany no zavatra ampanantenaina anareo fa ny lalan’ny fampandrosoana an’i Madagasikara mihitsy no efa manomboka ankehitriny.” Izay ny kabarin’ny filoha Rajoelina Andry tamin’ny lanonana fanombohana ny fanamboarana ny lalàm-pirenena RN5 A, mampitohy an’Ambilobe sy i Vohémar, afakomaly.
Mitondra fandrosoana mivaingana sy fivoarana haingana ho an’ity toerana sy faritra ity ny fanamboarana izany lalana izany. Toekarena izay nikatso sy niato tanteraka nandritra ny ampolo taony maro. “Koa anio isika, hanomboka ny asa fanamboarana ity RN 5 A ity“, hoy izy.
“Izahay tsy mavandy fa tanterahinay izay zavatra lazainay ary velirano no ataonay aminareo aty Ambilobe fa tsy maintsy ho vita ary atomboka io lalana io“, hoy izy. Fanamby efa nataony ny hanamboarana haingana io lalam-pirenena RN 5 A io, izay mampitohy an’Ambilobe sy i Vohémar ary mampiray ny faritra Diana sy ny faritra Sava izay faritra manan-danja amin’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny harena an-kibon’ny tany.
Nohamafisiny ny velirano…
“Lalana nampijaly anareo mponina eto hatrizay ary tsy nisy nanamboatra. Haiko fa maro ny toky fitaka natao anareo ary diso fanantenana imbetsaka ianareo mikasika io lalana io“, hoy hatrany izy. Nomafisiny àry ny velirano nataony fa tsy maintsy vita ny RN5A, vita tara. Efa vita ny kajy sy ny drafitra hanamboarana azy, efa vita sonia ny fifanarahana lasitra ho fiaraha-miasa hanatontosana ny asa.
Hamboarintsika ihany koa ireo lalana sy tetezana hafa mampitaraina ny mponina ao Ambilobe. Satria maharary azy izay maharary mponina, araka ny nambarany. Ampy izay ny fijaliana, ampy izay ny fotaka, ampy izay ny saran-dalana lafo loatra. Fotoan’ny fampandrosoana izao.